अघोषित राजनीतिक संकटकाल- विचार - कान्तिपुर समाचार
बालुवाटार दाहिना हुनेका लागि ठीकै होला, अरूलाई मौजुदा संस्था र संयन्त्र टेक्ने–समाउने ठाउँ भएनन् ।
कोरोनासम्बद्ध स्वास्थ्य संकटलाई यो विकराल अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउनमा तिनै जिम्मेवार छन्, जसले समग्र समाजका नाममा आफ्ना लागि मात्र निर्णयहरू गरिरहे, कमिसनका लागि सबैभन्दा ज्यादा गैरजिम्मेवार बनिरहे ।
वैशाख २४, २०७८ उज्ज्वल प्रसाई
विषयविज्ञता नभएका सर्वसाधारणले उपलब्ध सूचना र विश्लेषण पढेर बुझेको सत्य एउटै छ— कोरोनाबाट खेर जान सक्ने लाखौं मान्छेको एक बारको जुनी बचाउने सबैभन्दा भरपर्दो उपाय खोप लगाउनु हो । कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकामध्ये धेरैलाई रोगले गाँज्न सक्छ तर ठूलो क्षतिबाट जोगाउने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
वैज्ञानिकहरूले तोकेको अन्तरालमा सबै मानिसले दुई डोज खोप लगाउन पाए भने यो महासंकटबाट समग्र समाज जोगिन सक्छ । तर विडम्बना कस्तो छ भने, सिंगो समाजको वर्तमान र भविष्य जोगाइदिन सक्ने त्यही खोपमा भयानक षड्यन्त्र रचिएको छ ।
महासंकटबाट पार पाउने एक मात्र बाटो अवरुद्ध गराउने त्यस्तो षड्यन्त्र कहाँ हुँदै छ र कसले गर्दै छ ? खबरहरू भन्छन्, स्वयं बालुवाटार त्यो षड्यन्त्र रच्ने र कार्यान्वयन गराउने केन्द्र हो । कमिसनबाट आउने करोडौं रुपैयाँको खेल सुरु भएपछि खोप आउन नसकेको हो । खबरका सहजै बुझिने संकेत छन्— बालुवाटारकै हातमा त्यो लट्टाई छ जसमा गुजुल्टो परेर बेरिएको छ कमिसनको मुद्दा । कमिसनको त्यो लट्टाईमा फसेको लाखौं डोज खोपले आज बितिरहेका दर्जनौं मान्छेका ज्यान जोगाउन सक्ने प्रचुर सम्भावना थियो । अहो, सम्झँदा मात्र पनि शरीर फतक्क गलेर आउँछ ! कोरोनाको सिकार भएका ती चिनारुका अनुहारहरू झलझली आँखामा आउँछन् ! दुःख, आक्रोश र क्षोभले छाती ढक्क फुल्छ; गला अवरुद्ध हुन्छ !
आजका दिनमा बालुवाटार ठाउँविशेष, भवनविशेष र कोही पदासीनको बासस्थानविशेषको नाम मात्रै होइन । बालुवाटार स्वयं मौजुदा सबै संस्थालाई आफ्नो काबुमा राख्न सफल एक शक्तिपुञ्ज हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्ने व्यवस्थाको त्यस्तो केन्द्र हो जसले सारा व्यवस्थाकै नियति निर्धारण गरिदिन थालेको छ । त्यही सर्वशक्तिमान बालुवाटार सिंगो समाजको उद्धार हेतु ल्याइने जीवनबुटीको राजमार्गमा सबैभन्दा ठूलो तगारो बनेको खबर सार्वजनिक छ । अझै कति दिन र साता बालुवाटार त्यस्तै तगारो बनिरहन्छ, ठेगान छैन । अनि जोगिन सक्ने ज्यानहरू कति दिनसम्म यसै शून्यमा बिलाइरहन्छन्, यकिन छैन ।
के अहिलेको त्रासदी खोप नआएका कारण मात्र उत्पन्न भएको हो ? होइन । खोप ल्याउने र वितरण गर्नेबाहेक गर्नुपर्ने अरू थुप्रै काम थिए । पहिलेको अनुभवले कार्यसूची तयार गरिदिएको थियो, विषयका जानकार विज्ञहरूले गर्नैपर्ने कामबारे सुझाउने कुनै मौका चुकाएका थिएनन् । ती कामका सूची यहाँ दोहोर्‍याउन आवश्यक छैन । सामान्य सूचनामा पहुँच हुने जोसुकै सर्वसाधारणले पनि ती नभएका काम केके थिए, मुखाग्र भन्न सक्छन् । क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, अक्सिजन, औषधि, प्राविधिक जनशक्ति इत्यादिको विस्तार र चुस्त व्यवस्थापन । भारत र अन्यत्रका घटना र तीबारेका सूचनाका आधारमा समयमा लिनुपर्ने निर्णय । ती निर्णयबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने दायित्व । र, आम नागरिकको साथ लिएर गर्नुपर्ने तयारीबारे कसैले नसुझाएको पनि होइन । यद्यपि हिजोअस्तिसम्म ‘कोरोना परास्त गरेर नेपालीले आफ्नो पराक्रम सिद्ध गरेको’ जस्ता प्रचारमै व्यस्त थियो सत्ता । त्यही प्रचारले सर्वसाधारणलाई पनि आसन्न संकटको सही आकलन गर्न दिएन, अन्यत्रका आँकडासँग दाँजेर पहिले भएका क्षतिलाई कम आँक्न उसै गरी हौस्याइरह्यो ।
वर्तमान भयग्रस्त छ । जो जहिल्यै सत्ता र स्रोतभन्दा पर छ, उसका दुःख तेब्बर भएका छन् । को कति बेला कसरी फुत्त चुँडिन्छ, थाहा छैन । भोकको कैरन सुरु भए मुक्ति कहिले र कसरी होला, भन्न सकिन्न । बाँचेकाको भविष्य स्वयं अनिश्चयको डरलाग्दो भुमरी भएर उनीहरूकै आँखामा मडारिरहन्छ । प्रत्येक क्षण सुन्नुपरेका चट्याङजस्ता खबरले बलजफ्ती जुटाउन खोजेको शान्ति नराम्ररी बिथोल्छ । दुःखमा भएका साथी र आफन्तलाई सहयोग गर्न सकिन्न, आफैंले संकट भोग्दा कसैको दह्रो आड पाइएला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन । भरोसा बन्नुपर्ने संस्था सबै बालुवाटारको कब्जामा छन् । बालुवाटार दाहिना हुनेका लागि ठीकै होला, अरूलाई मौजुदा संस्था र संयन्त्र टेक्ने–समाउने ठाउँ भएनन् ।
यो एकसरो व्याख्याले भनिसक्यो— समस्या स्वयं विषाणु होइन । यो त्रासद वर्तमानमा हामीलाई ल्याइपुर्‍याउने मुख्य कारण कोरोना र यसका अनेक भेरियन्टहरू होइनन् । सूचना र संवेदनशीलताको कमीका कारण आम मानिसबाट कमजोरीहरू भएका होलान् तर समस्याको जड कारण ती ‘गल्ती’ गर्ने सर्वसाधारण पनि होइनन् । यो अवस्थामा ल्याउनमा खास व्यक्ति, खास समूहहरू दोषी छन्; तिनको पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।
कोरोनासम्बद्ध स्वास्थ्य संकटलाई यो विकराल अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउने ती निर्णायक मान्छेहरू हुन्, जसले समग्र समाजका नाममा आफ्ना लागि मात्र निर्णयहरू गरिरहे । तिनै जिम्मेवारहरू हुन् जो कमिसनका लागि सबैभन्दा ज्यादा गैरजिम्मेवार बनिरहे । तिनका लागि आफ्नो सत्ता, आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो पदीय भविष्य, आफ्नो बजार र आफ्नै बडप्पन मात्र केन्द्रीय चिन्ता भयो । तिनका प्राथमिकताको सूचीमा आम मानिस कहिल्यै परेनन् । यो महासंकट निम्त्याउने तिनै निर्णायकहरू हुन् जसले लोकतन्त्र भनिएको यो व्यवस्थालाई आम मान्छेका संकट पार लगाउने ऊर्जा बन्न कहिल्यै दिएनन् । तिनले निम्त्याएको यो संकट केवल स्वास्थ्यको संकट होइन । यो डरलाग्दो राजनीतिक संकट हो, यो स्वयंमा अघोषित संकटकाल हो । ती निर्णायक मान्छेहरूले जानीबुझी, थाहा पाईपाई, योजना बनाएर तर घोषणा नगरेर आम मानिसमाथि लादेको संकटकाल हो यो ।
सूचनामा पहुँच हुनेले दुनियाँमा त्यस्ता उदाहरणहरू पनि देखेका छन्, जहाँ आम नागरिकका चिन्तालाई केन्द्रीय बनाएर निर्णय गरियो । त्यस्ता जिम्मेवार निर्णायकका काममा भरोसा थियो, नागरिकले बलियो साथ दिए । त्यहाँ खडा गरिएका संस्थाहरूले पनि आम मान्छेकै चिन्तालाई मुख्य बनाए, हुन सक्ने ठूला क्षति जोगाए । यो सफलता केवल औषधि, अस्पताल र खोपको मात्रै सफलता होइन । निश्चय नै, विज्ञान र स्वास्थ्य क्षेत्रका सराहनीय काम हुन् यी । समयमा खोप लगाएर, सही निर्णय लिएर, उपचार दिलाएर, चुस्त व्यवस्थापन गरेर धेरैको ज्यान जोगाएको सही राजनीतिक निर्णयले हो । आम मानिसको सरोकारप्रति चिन्तित भएर यतिको सफलता हासिल भएको हो । त्यसैले यो राजनीतिक सफलता हो ।
जसले राजनीतिलाई तिकडमहरूको निर्मम खेलका रूपमा खेले, तिनले केवल प्रोपगान्डा रचे । सर्वसाधारण झुक्याउने विधि खोजिरहे, भ्रमका बाक्ला पर्दा हालेर सत्य छोप्ने दुष्प्रयत्न गरिरहे । तिनले सही सूचना लुकाए, तथ्यांक तोडमरोड गरे र आसन्न संकटप्रति आम मान्छेलाई चनाखो बन्न दिएनन् । अन्दाज नै नगरेको संकटको दलदलमा फस्न थालेका नागरिकलाई पदीय अहंकारको धरहरा देखाइरहे, नक्कली शानका कुम्भ भेला आयोजना गरिरहे । नेपालसँग मिल्दोजुल्दो खबर भारतको छ, त्यसो त केपी ओलीलाई मोदीकै देखासिकी गरेको आरोप लागेको आजदेखि होइन ।
सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमण फैल्याउने गरी लाखौं मान्छेको भेला हुने कुम्भमेला एक वर्षअघि नै सारेर धुनधानका साथ आयोजना गर्ने योजनाकार स्वयं जिम्मेवार सत्ताधारी हुन् । पछिल्ला खबर अझै याद राख्न लायक छन् । उत्तरप्रदेशका सबै जिल्लामा हिन्दुहरूले पवित्र मान्ने घरपालुवा जन्तु गाईलाई कोरोनाबाट जोगाउन हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ । यही प्रदेशमा मर्दै गरेका हजारौं मान्छेले न शय्या पाएका छन्, न औषधि, न अक्सिजन । अर्को खबरले भन्छ— गायत्री मन्त्रोच्चारणले कोरोना निको पार्न कति भूमिका खेल्छ भनेर थाहा पाउन सरकारी अनुदानमा अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ । यी सबै राजनीतिक निर्णय हुन्, सरकारी कदम हुन् ।
चालु राजनीतिक संकटकाल निमुखा, सुकुमबासी, मजदुर र सत्ताको सेरोफेरोमा नभएका आम मानिसका लागि सबैभन्दा बढी घातक छ । यी बहुसंख्यक मान्छेले यो राजनीतिक संकटकालको अन्तर्य आजै थाहा नपाउलान् र आजै यी सबै ती सत्तासीनलाई सबक सिकाउन नउठ्लान् । तर जति संकट झेलेर जिउँदो रहन्छन् र जतिले बुझ्छन्, तिनले हिसाब राख्लान् । कम्तीमा विस्मृतिमा नपुर्‍याई यी दुर्दिनहरूलाई सम्झेलान् र मुख्य दोषीहरूका अनुहार पनि खिपेर राख्लान्, मस्तिष्कमा । इतिहास कसरी लेखिन्छ, भन्न सकिन्न । सत्ताको सुमेरु घुमिरहने शिला–लेखकहरूले बुनेका कथा नै इतिहास भइरहे, सनकका धरहरा र अहंकारका कुम्भ भेलाहरू प्रशंसित होलान् । आम मान्छेले लेखेको इतिहासमा भने यी सबै विद्रूप असफलता र ढोङका स्मृतिस्तम्भका रूपमा अभिलिखित हुनेछन् । केपी ओली, नरेन्द्र मोदीजस्ता शासकहरू जनलिखित इतिहासमा कस्ता पात्रका रूपमा चित्रित हुनेछन् ? यिनलाई दिइने विशेषणहरू उच्चारण गर्नसमेत कति सकसपूर्ण, अहो !
प्रकाशित : वैशाख २४, २०७८ ०७:४६